Maqaal: Miyuu Boqor Mesut Ozil Yahay Wax-Ma-Taraha Kulamada Waaweyn? – Kooxda.com
Home 2017 February Champions League, Dib U Eegid, Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan Maqaal: Miyuu Boqor Mesut Ozil Yahay Wax-Ma-Taraha Kulamada Waaweyn?
Maqaal: Miyuu Boqor Mesut Ozil Yahay Wax-Ma-Taraha Kulamada Waaweyn?
February 15, 2017 · by	Abdi Hamid Zaciimka · 0
“Ozil waa xiddig Weyn, waa xiddih aad muhiin noogu ah. Xiddigaha waaweyni had iyo jeer waxa ay jawaabta bixiyaan marka ay garoonka ku jiraan” Arsene Wenger
“Marka kulanku sii weynaadaba; waa marka uu Eden Hazard si wanaagsan u ciyaaro. Balse marka aad u fiirsato Mesut Ozil waxaad la kulmaysaa Caksiga/kasoo horjeedka” Glenn Hoddle(Macallinkii hore ee England).
Shaki kuma jiro in Mesut Ozil yahay mid kamid ah xidigaha ugu hal abuurka fiican kubada cagta sidoo kalena taariikhu ay xusi doonto awoodiisa khiyaaliga ah ee gool abuuriseed isla markaana ay adkaan doonto in uu mustaqblaka so baxo xiddig ku naaloonaya aragtida isha bidhiqdeda ah ee u Mesut Ozil ku caanka baxay.
Wuxuu noqday xiddigii ugu qaalisanaa taariikhda Gunners kadib markii uu 2013-kii uu London Emirates ku yimi qarashaad gaadhaya £42.5 million (€47m) waxaana isla markiiba muqatay ididiilo ah in indha balac, ha dheeraato ama ha fogaatee horyaalka keni doono London.
Germankan ayaa xilli ciyaareedkaan dhaliyey 9 gool taas oo anu samaynin guud ahaanba saddexdii xilli ciyaareed ee kan ka horeeyay halka uu caawiyay 36 gool 100-kiisii kulan ee ugu horeeyay taas oo ah in kabadan ciyaaryahan kasta oo soo maray taariikhda Premier Leauge marka laga reebo Eric Cantona kaas oo cawiyay 39 gool 100-kiisi kulan ee ugu horeeyay.
Balse waxa is waydiin leh muxuu Mesut Ozil qabtaa kulamada waaweyn? Miyuuse Ozil yahay Flop-ka kulamada waaweyn?
Mesut Ozil ayaa shaki la geliyay booskiisa safka hore e kooxda Arsenal taas oo caawa ka hor tagi doonta kooxda Bayern Munich kulanka lugta hore ee Champions League kadib qaab ciyaareed xumo iyo kalsooni la’aan so wajahday xiddigaan kulamdiisii u danbeeyay e PL iyadoo qaar ka mid ah taageerayaasha Gunners-na ay codsanayeen in xiddigaan laga xooro safka hore ee ka hor tagaya Bavaria.
Ma aha keliya qaab ciyaareedkiisa liita ee uu xiddigaan soo bandhigayo kulamadii u danbeeyay , balse waxa jira arrin kale oo walaac ku haysa taageerayaasha Gunners taas oo ah in kubad sameeyahoodan uu yahay wax matare marka Arsenal ay la ciyaarayso kulamada waaweyn.
Keliya 2 gool iyo hal caawin ayuu Mesut Ozil ka sameeyay 15-kulan oo UCL ah oo uu ka hor tahay kooxaha waaweyn!!!!!!! caawana waxa uu ka hortagi doonaa Bayern Miyaa?
Marka aad dib inoogu soo celiso England iyo Rikoorka uu Mesut Ozil ka haysto 5-ta kooxood ee PL Ugu waweyn (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea and Tottenham) waxaad mar kale arkaysaa in Ozil uu aad u heeseeyo tusaalena waxa kuugu filan kulankii u danbeeyay ee kooxda Chelsea 3-1 kaga badisay kooxda Gunners.
Maxaad filaysaa marka uu Mesut 32 kulan safto? imisa gool ayuu dhalin karaa 32 kulan gudahood? hadiise uusan goolasha ku fiicnayn isla markaana uusan ahayn weeraryahan; imisa caawin ayuu ku dhiibi karaa?
Keliya waxa uu dhaliyey 5 gool waxaana uu saaxiibadiisa ku caawiyey Sideed gool guud ahan 32 kulan oo Mesut Ozil ka hor tagay 5-ta kooxood ee Premier League ugu waaweyn (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea and Tottenham) dhamaan tartamada oo dhan tan iyo intii uu kusoo biiray Arsenal.
Sidoo kale 32 kaas kulan ee Mesut Ozil ka hor tagay shanta kooxood ee sare ayuu diiwaanka gashaday 11 guuldarro,12 barbardhac, iyo 9 guulood
Jawaabta Su’aashayadii hore ayaa ah; HAA Ozil Waa Flopp-ka Kulamada Waaweyn. Midaasna waxa laga yaabaa in uu mar kale cadeeyo marka uu caawa ka hor tagaayo Kooxda Bayern.
Akhristahayaha aanu jecelnahayoo; ra’yigaaga Xor ayaad u tahay.
Filed in: Champions League, Dib U Eegid, Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan